डेटिङ र सेटिङ गर्ने ठुला नेताहरूलाई हटाउने पत्रकार अजयबाबुलाई कस्ले दियो ज्यान लिने धम्की? – PathivaraOnline
Home > भिडियो > डेटिङ र सेटिङ गर्ने ठुला नेताहरूलाई हटाउने पत्रकार अजयबाबुलाई कस्ले दियो ज्यान लिने धम्की?
काठमाडौं १० फागुन / पत्रकार अजयबावु सिवाकाेटीले आफुलाई शंकास्पद व्यक्तिले पच्छाइरहेको बताएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसनको डिल गरेको अडियो मिडियामा ल्याएका सिवाकाेटीले आफ्नो अफिस आसपास २ जना व्यक्तिले आफुलाई पच्छाइरहेको बताएका छन् । सुत्र बहसमा कुराकारी गर्दै सिवाकाेटी सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने आफुलाई कसैले नियालीरहेको थियो ।
यसरी आफिसमा समेत आएर दुइजना ब्यतिले ससंकित गरेको कुरा बताएका हुन् । सुरक्षा चुनौतीका बिषयमा प्रहरी प्रशासनले सिवाकोटीलाई काठमाण्डौ प्रहरी परिसर कमलपोखरि र बालाजु क्षेत्रबाट निगरानी गरिरहेको समेत सिवाकोटीले बताए । यसरि हेर्दा प्रहरी प्रशासनले पनि सुरक्षाको बिषयमा चाँसो दिएको देख्न सकिन्छ । तर पत्रकार सिवाकोटीले एउटा पत्रकारले समाचार लेखिरहदा उसको परिवार चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था किन छ भन्दै प्रश्न उठेका छन् ?
उनको यो कुरालाई हेर्ने हो भने कहिँकतै बाट अहिले पनि सिवाकोटीलाई सुरक्षाको बिषयमा चिन्ता रहेको बुझ्न सकिन्छ ।प्रधानमन्त्रीका निकटका पात्र समेत रहेका बास्कोटा विभिन्न समयमा पत्रकारमाथि कडा तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।
केहि समय अगाडी धुलिखेलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको खुलेर तारिफ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बास्कोटाको तारिफ गर्दै तुलोमा गोकुल बास्कोटा एकतिर र अरु मन्त्रिमण्डल अर्कोतिर राख्ने हि भने पनि बास्कोटाकै पल्ला भारी हुने कुरा बताएका थिए । जुन अहिले निकै चर्चामा रहेको छ ।
नेपाल बिरूद्ध धावा बोल्ने सरिता गिरीलाई पार्टी र साँसद पदबाटै हटाइने पार्टीकै तैयारी!